PS3 သို့မဟုတ်, Xbox များအတွက်ကြိုတင်မှာယူပါ Borderlands4နှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 10 အမေဇုံ၏အကြွေးပေါင်းအပိုဆုရ - BGR - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အပေးအယူ PS3 သို့မဟုတ်, Xbox အတွက် "ကြိုတင်မှာယူပါ Borderlands4နှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 10 အမေဇုံ၏အကြွေးပေါင်းအပိုဆုရ - BGR
သင်တစ်ဦး PlayStation သို့မဟုတ်, Xbox4တစ်ခုမှာပိုင်ဆိုင်လျှင်, သင်သိသာသိပါ Borderlands3ရာသီသစ်မှာအများဆုံးမျှော်လင့်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ သငျသညျပြီးသားရှိသည်မဟုတ်လျှင်, သင်ကျိန်းသေပျော်မွေ့သငျ့သညျ။3အတွက် Borderlands အမိန့်မှအမေဇုံကူးခေါင်း PS4 ou Xbox One မှာ ။ သင်တစ်ဦးကျောင်းအုပ်ကြီးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းလျှင်သင် $ 10 အမေဇုံ၏ခရက်ဒစ်ရပါလိမ့်မယ်။ ကြောင်း၏ထိပ်တွင်, သငျသညျလညျးလက်နက်နှင့်အတူဆုကြေးငွေအသားအရေ pack ကို get သို့မဟုတ်အမိန့်ပါ! အဆိုပါဂိမ်းစက်တင်ဘာလ 13 အပေါ်ဖြန့်ချိလိမ့်မည်, ဒီတော့ဒီသဘောတူညီချက်ခံစားရန်အချိန်အများကြီးမရှိ။
MAYHEM ၏စိတ်လှုပ်ရှားစရာ TO သို့လမ်းလျှောက် - ထိုဒမြမျိုးနွယ်စုများစုစည်းသည်ကလပ်ဆိုအမွှာပူးဝါသနာရှင်များ Stop နှင့်နဂါးငွေ့တန်းအတွက်အဆုံးစွန်အာဏာကိုအခိုင်အမာပြောဆိုသည်။ သင်သာတစ်မုဆိုးစိတ်လှုပ်ရှားစရာများရှာဖွေရေးအတွက်ခုန်, သူ့ကိုအနိုင်ယူဖို့လက်နက်တိုက်များနှင့်မဟာမိတ်များရှိသည်။
သင့် Vault Hunter, သင့် playstyle - လေးတစျခုထူးကဲဖြစ်လာမုဆိုး, ထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်နှင့်အတူအသီးအသီး, ဂိမ်းစတိုင်များ, စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာတန်ချိန်ခုန်။
ဂန်းနားအဖြစ် Moze: Moze အားဖြည့်ရန်လိုအပ်သည်သောအခါ, ယင်း၏ mech digests - တစ်ဦးအပိုစွမ်းအားအဘို့ - သံထမ်းရွက်။
ဥဩအဖြစ် Amara အဘိဓါန်: တိုက်လေယာဉ်ယုံကြည်မှုနှင့်နိုင်စွမ်း, Amara သည်သူ၏ရန်သူများကိုချေမှုန်းဖို့သူမ၏မိန်းမတပိုင်းငါးတပိုင်းအင်အားကြီးကိုအသုံးပြုသည်အီလက်သီးမခေါ်နိုင်ပါ။
BEASTMASTER အဖြစ် FL4K: အဆိုပါ FL4K အမဲလိုက်အဘို့အနေထိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့မာစတာအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအမိန့်ကိုလိုက်နာသူကိုသစ္စာစောင့်သောတိရစ္ဆာန်များအဘို့အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့အကြိုက်ဆုံးလုယူရာဥစ္စာ? ဤသူတို့သည်ဆင်းရဲသား sucker unsuspecting ဒမြ။
qu'OPÉRATIFအဖြစ် Zane: gadgets စစ်မြေပြင်အတွက်အထူးပြု, Zane, တိုက်ပွဲသို့ချော်ပရမ်းပတာဖန်တီးသူအဲဒီမှာဘယ်တော့မှခဲ့တူသောပြန်ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ဖို့အလွန်အမင်းသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။
LOCK, Loading, AND များကိုလည်းသိမ်းယူ - သေနတ်များနှင့် gadgets သန်းပေါင်းများစွာနှင့်အတူတိုင်းရန်ပွဲအသစ်သောပစ္စည်းကိရိယာများ၏အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ မော်တော်ကားအကာအကွယ်အကွယ်အကာနှင့်အတူသေနတ်? စစ်ဆေးပါ။ မီးတောင်တံထွေးထွေးခြင်းမီး generate ကြောင်းသေနတ်? သိသာထင်ရှားတဲ့။ နှုတ်ကဲ့ရဲ့ပစ်နေချိန်မှာခြေထောက်နှင့်အမဲလိုက်ခြင်းရန်သူများကိုပေါက်သောလက်နက်များ? yeah ငါအရမ်းကြောင်းရှိသည်။
NEW Borderlands - တစ်ဦးချင်းစီကိုဖျက်ဆီးဖို့ထူးခြားတဲ့လေ့လာစူးစမ်းဖို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနှင့်ရန်သူများကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, ပန်ဒိုရာကျော်လွန်ပြီးအသစ်သောကမ္ဘာရှာဖွေပါ။ , ရန်လိုသဲကန္တာရထဲမှာကိုက်ဖြတ်မျက်နှာပေုံစစ်ဘေး, ဆိုးဝါး bayous နှင့်ပိုပြီးအတွက် navigate!
Coop OP လှုပ်ရှားမှုအတွက်စာရှောင်ခြင်းနှင့်အောက်ခြေမရှိဘဲနဲ့ - မခွဲခြားဘဲသင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကို၏, အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်အုပ်စုခွဲမျက်နှာပြင်အတွက်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သူမဆိုအတူ Play ။ အဆင့်နှင့်မစ်ရှင်၏တိုးတက်မှုကို။ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်ရန်သူများကိုနှင့်စိန်ခေါ်မှုများ shoot, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးတည်းကိုသင်ပိုင်သောဆုလာဘ်အသီးအနှံကိုရိတ်ရ - ဥစ္စာကိုလု ယူ. မရှိမရှိခြင်း။
လိုက် Twitter ပေါ်တွင် @BGRDeals ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်မှာနောက်ဆုံးပေါ်အကောင်းဆုံးအပေးအယူ၏ရင်ပေါင်တန်းနိုင်ရန်စောင့်ရှောက်ရန်။ Web ကို။ ပမာဏကန့်သတ်ဖြစ်နိုင်သည်။ စျေးနှုန်းများအသိပေးစာမပါဘဲပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြပြီးကူပွန်မည်သည့်အချိန်တွင်မကုန်ဆုံးစေနိုင်သည်။ BGR ဤဆောင်းပါးကိုတဆင့်ထားရှိအမိန့်အပေါ်တစ်ဦးကော်မရှင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
အမေဇုံအသက်ရှုသာယနေ့ $ 55 ကနေသံမီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်း Cuisinart န့်ပစ် - BGR
Pixel Gun ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် 3D Mod 165Launcher 1 Wall Hack Godmode Rapidfire & MORE - VIDEO
#moumbamurielbalnche #pakgne #cyntiyadesdrama MITOUMBA နှင့်အဖြူရောင်လူသတ်မှု - ဤတွင်ဗီဒီယိုပါရှိသည်။
Echo Dot ပါသော 601 $ အတွက် Deebot 218 စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်သည်အမေဇုန်အတွက်အကောင်းဆုံးအပေးအယူတစ်ခုဖြစ်သည်
ခန္ဓာကိုယ်အရှက်ကွဲခြင်း၏သားကောင် Selena Gomez: "ဒါက m
အိန္ဒိယ - Sabarimala စီရင်ချက်။ ။ တရားရုံးချုပ်အားယနေ့စီရင်ချက်ချခြင်းမပြုမီဘုရားကျောင်း ၀ င်ခွင့်စာချွန်လွှာမှတ်တမ်းအိန္ဒိယသတင်း
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်7,455